Ingabe ukukhuphuka kukuhle ngebhayisikili? - Ukuhamba Ngebhayisikili
Main > Ukuhamba Ngebhayisikili > Indlela yokukhuphuka ngebhayisikili - siyixazulula kanjani
Indlela yokukhuphuka ngebhayisikili - siyixazulula kanjani
Ingabe ukukhuphuka kukuhle ngebhayisikili?
Ukukhuphukakusiza ukuqinisa umnyombo wakho, kepha futhi ungathuthukisa i-ukukhuphukangokwenza off-the-ibhayisikiliukusebenzisa okuyisisekelo ukwenza leyo misipha ikwazi ukumelana nokukhathala uma ugibela.17. 2016.
(Amasondo ajika emgwaqweni) (ukuphefumula ngesigqi) - ukukhuphuka. Kuyisihluku. Kubuhlungu.
Kepha kwanelisa ngokumangazayo, indlela ephumelela kunazo zonke yokukhuphuka ukuthambekela kokunethezeka ukuzilolonga. Ekuqaleni kokukhuphuka, ungangeni kokubomvu ngamaphaphu amemezayo nemilenze evuthayo, kepha hamba ngejubane lomnenke - esikhundleni salokho, khuphuka ngamabomu ngamabomu. Thatha isikhashana ukungena esigqi bese kuphela lapho ucabanga ngokwandisa i-tempo kancane.
Lokhu kuzuzisa kakhulu njengoba ukukhuphuka kungeke nje kulimaze kancane, futhi uzothola ukuthi ugcina ngokukhuphuka okusheshayo ungabhebhethekisa ubuhlungu obukhulu njengoba uthanda. Kepha khumbula, njalo lapho ukwenza, ngakho konke ukukhuphuka okwehlayo, amandla akho okukwenza futhi kulolo hambo kuzonciphisa kakhulu ijubane lakho. (Umculo weTechno) - Kulula kakhulu ukudlula kukho, ukhungathekile futhi udideke nenani lezeluleko umuntu angazithola ekukhuphukeni isihlalo sehhashi noma ekusukumeni kwezinyawo.
ukuqhuma okuncane kokuvivinya umzimba
Kepha iqiniso ukuthi, akunandaba. Abantu abambalwa bakhululeke ngokwengeziwe ukuphuma esihlalweni, kepha iningi labo likhetha ukukhuphuka lapho lihlezi. Kepha ungenza lesi sinqumo uwedwa. - Indlela ejwayeleke kakhulu yokugibela ukuthambekela ukuhlala esihlalweni, ukuze nje wehle esihlalweni ukuze unciphise ingcindezi kubhodlela wakho noma ngisho nokwelula imilenze yakho, noma ukuzihudula engxenyeni eyeqile yomqansa. (I-Techno music) Enye into engaba yinkinga eyeqile yibhayisikili lakho ukubambeka ekukhetheni igiya - Empeleni, iphutha elikhulu kakhulu ongalenza maqondana nalokhu ukukhetha into ezwakala ingeyona eyemvelo, ngakho-ke uzizwa ungakhululekile.
Abagibeli abaningi bahamba kancane kancane ngegiya elinzima, ikakhulukazi uma bebasha kulo mdlalo. Lokho akuyona into embi impela, kepha ungakuthola kulula ukuhambisa ngezinyawo cishe ngezinguquko ezingama-80 ngomzuzu; Ukujika masinyane kungenzeka kuthathe umkhuba ukusebenza kahle, futhi abukho ubufakazi bokuthi kuzoba lusizo. (Heavy beat techno music) - Noma kunjalo, ukuze ukhuphuke kalula kudingeka uzijwayeze.
Futhi lokho kusho ukukhuphuka izintaba. - Yebo, kunjalo kufanele ulunge, kepha kuyasiza futhi uma ujwayele umuzwa wokuqwala. Usasebenzisa imisipha efanayo naleyo osendizeni, kodwa uzoyisebenzisa ngendlela ehluke kancane. - Izindaba ezimnandi kithi okungenzeka ukuthi azihlali eduze kwezintaba ukuthi ukushayela kumqeqeshi wasendlini kungalingisa ukukhuphuka kahle impela edolobheni elikhulu, ungakhathazeki.
Khuphuka ngangokunokwenzeka emhlabeni wangempela, uma isikhathi sivuma, khona-ke ngena kumqeqeshi wakho bese uqala ukunyathela. (Umculo weTechno onesigqi esinamandla) - Manje ungacabanga ukuthi sikunikeza amathiphu amane, elinye lawo empeleni ukukhuphuka ukukhuphuka kuyinto elula ngokweqile, okuwuhlobo lobuciko uh, kunezinto ezimbalwa, amasu ambalwa, angenza umehluko omncane lapha noma laphaya - kepha into ebaluleke kakhulu ukungacabangi kakhulu ngokukhuphuka. Njengoba iqembu lodumo uFunkadelic lake lasho, 'Khulula ingqondo yakho nembongolo yakho.' Landela. 'Uma uthanda le ndatshana futhi ungabhalisanga ku-GCN, ungakwenza lokho ngokuchofoza umhlaba.
uhlanza kanjani ibhayisikili
Kumahhala ngokuphelele - Yebo, futhi nazi ezinye izindatshana ezimbili esicabanga ukuthi ungazithanda, eyokuqala yalezi ingezansi futhi nguMat ofundiswa ukukhuphuka ngu-Alberto Contador. Futhi omunye okuleli khoneni yimina noSi Richardson ebuza ukuthi ungalithuthukisa yini ikadidi lakho?
Ingabe ukuhamba ngebhayisikili akulungile ekukhuphukeni?
Kwabaningi bethuukuhamba ngebhayisikiliisisiza ukuthi sehlise isisindo (amafutha) kunokuzuza isisindo futhi sithuthukisa ukuqina kwe-cardio okusizayoukukhuphuka. Kubuye kulimaze kakhulu amalunga kunokusebenza.
Kungani abagibeli behamba kancane emafulethini?
Okukhipha amandla kwehla kakhulu.
Lapho imisipha emikhulu yama-quads, imisipha, nezinqe zakho ikhathala ngaphambi kokuba ufike esiqongweni segquma, abagibeli bagcina begaya kancane benyuka indlela yabo ekukhuphukeni kokukhishwa kwamandla okuphansi kunalokho abangaqhubeka nakhoisicabaumhlabathi.
Ingabe ukuhamba ngebhayisikili emgwaqweni kuwumdlalo oweqisayo?
Ukuhamba ngebhayisikili emgwaqenikuyintoezemidlalo ezeqisayolokho kudinga ukuqeqeshwa nokusebenza ngokuzinikela. Empeleni uzomangala ukuthi indlela aibhayisikili lomgwaqokungaba njalongokweqile.
Imbalwa imidlalo evivinya imingcele yabasubathi abangochwepheshe njengamabhayisikili. Kuyisongo esithukuthele. Kepha akukhona nje ukukhuthazela komuntu emjahweni wokujaha okunikeza ifomula yokuphumelela, kepha futhi nobuhlakani bomuntu.
Yibhayisikili elisheshayo emhlabeni. Emidlalweni ephezulu, umehluko phakathi kwempumelelo nokwehluleka imvamisa umehluko omncane kakhulu. Ikamu eliyisisekelo lelinye lamaqembu aphumelele kakhulu kwezemidlalo emhlabeni.
Abagibeli bamabhayisikili bamathrekhi eGreat Britain bafike phezulu ematafuleni ezindondo kuma-Olimpiki amathathu edlule, futhi iqembu eliqhubeka nokwenza abawinile. Sifuna ukushesha kunabo bonke emhlabeni, asikwenzi lokho. Sifuna ukuwina ama-Olimpiki, sifuna ukuwina ngesikhathi esisheshayo.
Emdlalweni lapho izinhlanga zinqunywa ngo-1/1000 womzuzwana, u-Emily nozakwabo badlala ngento eyodwa: inzuzo engezansi. Ukuhola okuyingxenye eyodwa nohafu kuzokwenza lowo mehluko ngalolo suku. Beka ingcindezi.
Futhi enye yezindawo ezinhle kakhulu zokuthola ukuthi leeway encane isebhayisikili. Indoda esemqoka eqenjini kulokhu yingcweti ye-aerodynamics futhi owayengunjiniyela womjaho weFormula 1. Umsebenzi wami ulula, ubuchwepheshe nobunjiniyela kunoma iyiphi engingayisebenzisa ngokuhlakanipha ukwenza iqembu lisheshe.
UProfesa Wezobunjiniyela waseCambridge University, uTony Purnell, waklama ibhayisikili elidume umhlaba wonke iT5GB nomkhiqizi uCérvelo. Ngokunciphisa kakhulu ukuhudula, kwasiza iqembu laseBrithani ukujabulela ama-Olimpiki abo aphumelela kakhulu. Yibhayisikili elisheshayo emhlabeni.
Indlela lezi zingqimba ze-carbon fiber ezakhiwe ngayo yenza ibhayisikili elilula futhi eliqinile ngaphandle kokudela i-aerodynamics, wonke ama-millisecond amakhulu anqunywe ushintsho oluncane lokuklama, ngisho nasezintanjeni, zamandla owakhiphayo ahamba ngokungqubuzana okulahlekile kuketanga. Uma ungakunciphisa lokho kulahleka, kusho ukuthi umgijimi unamandla athe xaxa wenza wonke umehluko emidlalweni phakathi kwesiliva negolide. Ukuphelela kwe-aerodynamic akulandelwa kuphela ngokungakhathali ebhayisikili, kodwa nakumuntu okuyo.
Umfana oneminyaka emihlanu
Ukuma ngqo komshayeli kungenza umehluko. Ngaso sonke isikhathi ngaphambi kwesheduli, wayenemizuzwana engama-45 phambili ngemuva kwamakhilomitha angama-40. Ngo-1996 umpetha wama-Olimpiki uChris Boardman wephule irekhodi lomhlaba lehora elilodwa.
Ngenkathi uBoardman esesikhundleni seSuperman, izingalo zolulelwe phambi kwekhanda lakhe ukuze kusetshenziswe i-aerodynamics ebushelelezi. Ngokuvulela indlela isikhundla sakhe esidumile se-superman. Namuhla lelo lifa liqhubeka e-Boardman Performance Center esezingeni eliphezulu e-Evesham, eNgilandi.
Idizayini yebhayisikili ingasiza ngokuphelele, kepha siyabona ukuthi iningi lemiphumela ye-aerodynamic kanye ne-dragis ivela kumgibeli uqobo. Hlala phansi, ungitshele kancane ukuthi sifuna ukuya ngakuphi, nokuthi sifuna ukubheka ini. Namuhla, uJamie usiza umgibeli wamabhayisikili oqeqeshiwe uDan Bigham ukuthola ukuma kwakhe okuhle ngomjaho olandelayo wokulandela iqembu.
Emhubheni womoya, uDan ulwa nesivinini somoya esingeqile ku-60 km / h ukulingisa izimo zokuhudula azodalulwa kuzona kwithrekhi. Ukusebenza kwakhe, futhi ekugcineni impumelelo yakhe, ingaxhomeka ochungechungeni lwezinguquko ezicishe zingabonakali esimweni sakhe ebhayisikili. Kulungile Dan, masenze ushintsho lwethu lokuqala, lokhu ngeke sikwenze ngokushesha.
Ngicela, sithuthe izandla. Ngokwenza izinto sihambisa izandla zakhe phambili kancane bese siyazilungisa. Uma ibanga phakathi kwabo lingamamilimitha kuphela, uDan usheshisa cishe isigamu somzuzwana ngekhilomitha.
Sishayela irekhodi lomhlaba lapha, kufanelekile ukuthi ube nakho. Woza ngosuku lomjaho, izinguquko ezicashile ezinjengalezi zingaletha inzuzo enkulu eqenjini likaDan. Ngokwami, ngicishe ngibe ngu-4/10 ngokushesha, kuphela uma sekuyisikhathi sami, futhi uma lokho kuwina bekukwenzelwe wonke umuntu oseqenjini, khona-ke sisonke sekusele imizuzwana eyodwa nohhafu kuya kwamabili.
Isithunzi sokuhamba ngebhayisikili sonakaliswe ukusebenzisa izidakamizwa. Kepha ukuphishekela kwakhe ukuzuza okusemthethweni osezingeni eliphansi kusalungiselela ibanga lezinye izindlela eziningi. Abagibeli bamabhayisikili abahamba phambili emhlabeni wonke baseBrithani babhekana nokuncintisana okwandayo okuvela kwizimbangi ezisheshayo ukufunda ukuthi zingasungula kanjani, futhi ukufuna inzuzo engenamsebenzi kuba semaceleni nakakhulu.
Ingabe ukuhamba ngebhayisikili emgwaqeni kuyimidlalo eyingozi?
Ukuhamba ngebhayisikilikungaba yiezemidlalo ezeqisayo, futhi kunjalo, kepha akuyona eyabo bonke abantu. Ukwenza njengokuzilibazisa nokuphuma lapho uzozama kubalulekile. Kuyinzuzo enkulu kuwe nasemphakathini ongayenzaibhayisikili. Ikusindisa imali, ikhiqize imali emnothweni, futhi idale indawo eluhlaza.
Ingabe ukukhuphuka kulula kubantu abade?
Abaqali abadengokuvamile tholaukukhuphuka kalulalapho ziqala ngaphandle kokufushaneabagibeliyenza futhi kaningi akugxili kakhulu kumasu, ngoba bayakwazikhuphuka ngamandlafuthiNgokuqinile kakhuluamamaki njengoba eba namandla. Leziabantubaqeqeshelwe ukukusiza ukuthi ubengconoukukhuphuka, ngakho-ke thatha izeluleko zabo.
Ingabe ukukhuphuka kukwenza ube mude?
kuyakwenzaidwalaukukhuphuka kukwenza ube mude? Cha kodwa: Kungaba ukuzijabulisa nokuzivocavoca okuhle.
Ingabe ukuhamba ngebhayisikili kunzima kunokugwedla?
Kuilingana nenani elifanayo lamakhalori ashisiwe ku-ibhayisikilinoma ngaphakathiumjikelezo, babona ukuthi basebenza kakhuluNgokuqinile kakhulu. Lapho uhamba ngejubane elinamandla,ukuhamba ngebhayisikilikusha ama-calories angu-391 ngemizuzu engama-30 ngenkathiukugwedlakusha 316; ukusebenzisa imayela leminithi eli-9 kusha ama-calories ayi-409.
Bafaneleka kanjani abagibeli bamabhayisikili?
Ukufaneleka. Ngokwesilinganiso esezingeni legolide lokuqina kwenhliziyo, i-V02 max (noma ingakanani i-oksijini umzimba wakho ongayisebenzisa ngomzuzu), zinhle ngokuphindwe kabilikufanelekilenjengomgibeli omaphakathi we-non-Tour wobudala obufanayo okulungele ukuma okuhle. Lowo muntu ojwayelekile une-V02 max engaba ngu-40 ml / kg / min kuye ku-45 ml / kg / min.
Kungani ukuhamba ngebhayisikili kungumdlalo onzima kunayo yonke?
Mhlawumbe kunecala elenziwa lokho, kukho konke okunzima kakhuluezemidlalo,ukuhamba ngebhayisikilikudinga ukuguquguquka okunamandla kakhulu, kwesikhashana. Yini eyenzaukuhamba ngebhayisikiliKunzima ngokwehlukile ezingeni lezengqondo izimo ezingalawuleki ezinye eziningiezemidlaloabanayo, uthiezemidlaloisazi sokusebenza kwengqondo uDkt Josephine Perry.
Yini okudingeka uyazi ngokugibela ibhayisikili?
Uma ulandele izinhlelo zokuqeqeshwa ngebhayisikili zaseBrithani, uzobe uhlolile futhi wagibela ngokuya ngeFunctional Threshold Heart Rate (FTHR) noma iFunctional Threshold Power (FTP) yakho. Izindawo lezi zibalo zikuvumela ukuba uzibale futhi, njengoba usufunde ukuthi ungahamba kanjani nazo ekuqeqeshweni, zibaluleke kakhulu ekuhambeni ngezinyawo ukukhuphuka okude noma okuningi.
Iyiphi indlela engcono yokuqwala intaba?
Amanye amagquma asemqanseni kakhulu ukushesha futhi kumane nje kuyindaba yokuwanyusa. Kodwa-ke, kuma-gradients angajulile futhi ukhuphuka isikhathi eside, noma ngabe usebenzisa ukushaya kwenhliziyo noma amandla, ukuhamba ngeso lengqondo kungenye yezikhiye eziphambili zokuphumelela empumelelweni.
izithelo nemifino kashukela ephansi kakhulu
Kufanele ukhuphuke intaba enkulu kangakanani ukugibela ibhayisikili?
Iningi lezemidlalo lizoba negquma okungenani elilodwa ozibukayo kuphrofayela nokwesaba. Uma ugibele inselelo ye-epic Alpenbrevet yokuhamba ngebhayisikili eSwitzerland uzoba ngaphezu kwamamitha ayi-7,000 wokuqwala ukuzijwayeza wona!
ngebhayisikili udonga olukhulu lwechina
Ukuhamba ngebhayisikili udonga olukhulu lwechina - sesha izixazululo
Ungakwazi ukugibela ibhayisikili ku-Great Wall yaseChina? IGreat Wall yaseChina yayiyisakhiwo esasingangeneki eminyakeni engama-3 000 eyedlule. Namuhla, ungahamba, noma ugibele ibhayisikili elihlikihliwe, lonke ubude balo obungu-8,850km.
Ukufudumala ngebhayisikili - izimpendulo ezinkingeni
Ingabe kufanele ufudumale ngaphambi kokuhamba ngebhayisikili? Ukuhamba ngebhayisikili kufana nanoma imuphi omunye umdlalo noma ukuzivocavoca, ngomqondo wokuthi kubalulekile ukufudumala kahle ngaphambi kokuba ugibele i- # EverydayAdventure. Ukuzifudumeza ngaphambi kokuhamba ngebhayisikili kungakhuphula ukubekezela kwakho nokuqina kwakho, okuvumela imiphumela engcono uma kukhulunywa ngohlangothi lomsebenzi wokuqina.16 июл. 2019 г.
Amabhayisikili eLemond - ungahlala kanjani
Kwenzekani emabhayisikili eLeMond? Uphawu lweLeMond Bikes lukhuthazelele ubunzima ekuqaleni kwempilo yalo kubandakanya nesipiliyoni sokufa ekufikeni kwalo kokuqala. Ngo-2010, uTrek wamemezela ukuthi uzoyeka ukukhiqiza ulayini wamabhayisikili weLeMond, kanti ukuba khona kukaLeMond embonini yamabhayisikili kwakukhawulelwe kolayini abahlukile babaqeqeshi bomoya.20 сент. 2013 г.
izilinganiso zesigqoko sebhayisikili
Izilinganiso zesigqoko sebhayisikili - imibuzo ejwayelekile
Siyini isigqoko sebhayisikili esiphephe kakhudlwana? IBontrager Rally MIPS ithole amaphuzu aphakeme kakhulu okuphepha phakathi kwazo zonke izigqoko zokuzivikela ezihlolwe ngo-2020.
Isihlalo sebhayisikili - ireferensi ephelele
Siyini isihlalo sebhayisikili esintofontofo kakhulu? Okunethezeka Ngokuphelele: Isihlalo Se-Bikeroo Oversized Comfort Bike. Abagibeli bamabhayisikili abangaphezu kuka-6 400 basithanda lesi sihlalo sebhayisikili iBikeroo ngezizathu eziningi. Kanye nomklamo we-ergonomic, isihlalo sehhashi esidumile sine-padding eyanele kanye nomumo osayizi omkhulu wenduduzo eyengeziwe nokusekelwa okwengeziwe. Mar 19, 2021
carb ukulayisha ngebhayisikili
Ukulayisha ibhayisikili le-carb - indlela yokuphatha
Ingabe ukulayishwa kwe-carb kusebenza ngebhayisikili? Ucwaningo lukhombisile ukuthi ukulayishwa kwe-carb kwandisa isikhathi sokukhathala cishe nge-20%, ngenkathi ukuthuthuka kokusebenza kuzulazula cishe ku-2%. Ngakho-ke inzuzo yayo yangempela ukukusiza ukuthi uqoqe amamayela kwasekuqaleni, kunokuba uwakhwele ngokushesha, ikakhulukazi uma lokho kugibela kukude kunemizuzu engama-75.